Karl-Heinz Rummenigge Ayaa Aaminsan In Dib Loo Furo Markay Suurtagal Tahay Horyaalka Bundesliga Sababo La Xidhiidha Dhaqaale Xumo Jirta? | Malcab.com Wararka Ciyaaraha
Karl-Heinz Rummenigge Madaxa fulinta ee kooxda Bayern Munich ayaa aaminsan inay lama huraan tahay in Bundesliga dib loo bilaabo markii ay suurta gal tahay sababo dhaqaale iyo isboorti.
Sida tartamada adduunka oo dhan, Bundesliga waa la joojiyay dadaal loogu talagalay in lagu xadido saameynta coronavirus.
Si kastaba ha noqotee, waxay u muuqaneysaa inay duulimaadka ugu sarreeya ee Jarmalka ay ku dhowdahay inuu ku laabto horyaallada kale maadaama kooxaha intooda badani ay mar hore dib u bilaabeen tababar kooxo yar yar, iyadoo kulamada loo qorsheeyay inay ka dambeeyaan albaabada xirnaa horraantii May.
Waxaa jiray cabsi laga qabay in horyaallada qaarkood ay noqdaan kuwa gabi ahaanba la xoqin lahaa haddii aan la soo afjari karin toddobaadyada soo socda, laakiin Rummenigge ayaa si adag uga horyimid fikirkaasi.
Waxaan ognahay inay lagama maarmaan tahay in markale la bilaabo labo sababood awgood, ”ayuu u sheegay Corriere dello Sport.
“Midka hore waa kan isboorti Waa inaad ku wareejisaa cinwaanka ogow kooxdii ka qeyb qaadan doonta koobabka, oo hoos loo dhigi doono, Ta labaad wax aan ka yarayn waa dhaqaale Halkan telefishannada baahiya cayaaraha waxay saameyn xoog leh ku leeyihiin dakhliyada.”
Si looga caawiyo yareynta saameynta dhaqaale, Bayern iyo seddexda wakiil ee kale ee u mataleysa Champions League 2019-20 Kooxaha Borussia Dortmund, RB Leipzig iyo Bayer Leverkusen ayaa dhamaantood u yaboohay 20 milyan euro oo ay ugu yaboohaan kooxaha Bundesliga.
Rummenigge wuxuu ka digay iskaashiyada noocan oo kale ah inay lagama maarmaan u noqon doonaan ciyaarta ka dib toban sano oo qarash gareyn ah.
“Muddo 10 sano ah, kubada cagta waxay ku noolaa wixii kahoreeyay wixii ay aheyd, naadiyadiina waxay qaateen khatar kasta, Waqtiyadaas adag oo kale, xaashiyaha dheelitirka looma xisaabayo lacag ahaan” ayuu raaciyay.
“Dhibaatada waa caalami, xalka waa in la wadaagaa. Goobta ayaa xaddidi karta dhaawaca. FIFA iyo UEFA waa inay horumariyaan xiriirkooda isla markaana ay dhaqaalahooda dhaqangeliyaan.”